Abavelisi beemveliso kunye neFektri - China Imveliso yabenzi
Ngesiqhelo fiberglass mesh
Fibreglass mesh kusekwe C-iglasi fiberglass ilaphu ephothiweyo, emva koko wawutyabeka ulwelo ukumelana kwealkali. I-fiberglass mesh yinto efanelekileyo yokwakha i-EIFS (ingaphandle yokugquma kunye nenkqubo yokugqiba), esetyenziselwa ukuqinisa udonga, uphahla olungangeni manzi, ukubethelela isamente, iplastiki, ibhitumene, udaka, imarble, mosaic, njl. ubukhulu umnatha ngokwemfuneko yakho. Uphawu lwe-fiberglass mesh: 1. uzinzo lwekhemikhali: ukumelana ne-asidi ...
Chaza ngokufutshane: I-fiberglass mesh yemosaic ilukiwe yi-C-iglasi yefayibha ye-fiberglass, kwaye yagutyungelwe nge-alkali enganyangekiyo. Isicelo: Isetyenziswe ngasemva kwe-mosaic kunye nelitye njengokuqinisa. Inzuzo: Umnatha uhlala uthe tyaba, ukuze ukwazi ukunamathela ngcono kwi-mosaic okanye ilitye, kuba sivelisa umsonto we-fiberglass ngokwethu ukuze sikwazi ukulawula umgangatho kwaye umsebenzi wethu unezakhono. Sisebenzisa ukutyabeka kwealkali enganyangekiyo ekumgangatho ophezulu ukuze umnatha womelele kakhulu, kunye necoati yethu ...
Ifayibha yeglasi iteyiphu yokuncamathela yileyiphepha yokutyabeka i-acrylic copolymer eyahlulwe ngobubanzi obahlukeneyo kunye nobude, iipropathi zeekhemikhali zeglasi ezinemichiza ezinzileyo kwaye kungabi lula ukuyidibanisa, ukulungiselela ukulungiswa kodonga, umhombiso, iintanda zodonga, imingxunya kunye nodonga olomileyo. Inokuncanyathiselwa kwakhona kwibhodi ye-gypsum, isamente kunye nezinye izinto zokwakha ukuthintela ngokupheleleyo ukuqhekeka kweendonga kunye neekona. Kwangaxeshanye, inokusetyenziswa kunye, ifayibha yeglasi yokuzimela-yokuncamathelisa ibhendi yethu, ufakelo loyilo loyilo kube lula ...
Umsonto we-fiberglass: I-C & E iglasi yentsimbi eyolukiweyo luhlobo lwe-singel ply okanye iiplies ezininzi zefayibha yentsimbi eneempawu zamandla aphezulu, ukumelana nokubola, ukumelana nobushushu kunye nokufunxa okuphantsi njl. inkampani yethu inokubonelela ngendlela eyahlukileyo ye-twist, i-plies, i-linear density yarn enobume obahlukeneyo beebhotile ezinje ngebhotile yobisi yeplastich, iphepha lephepha kunye ne-cone bobbin. I-TYPE: Imisonto ye-fiberglass inenani elichaziweyo le-E-Glass filaments yegama elithile ...
PVC Camera welding wocingo
PVC wire welding umnatha na olunye uhlobo welding wocingo. Kwahlukile ngocingo oluhanjisiweyo olwenziwe ngesinyithi, ngenxa yonyango lomphezulu ohlukileyo. PVC wire welding wocingo wawutyabeka kunye PVC okanye PE, PP umgubo ngonyango vulcanization, nto leyo eye iingenelo adhesion olomeleleyo, nokumelana elungileyo kunye nombala oqaqambileyo. Ukwaluka kunye neempawu: ucingo sentsimbi wawutyabeka ngeplastiki emva iwelding yombane. Inempawu ze-asidi kunye nokumelana nealkali, ukuguga, ukungapheli, imbovane ...
Isefu welding wocingo
Isefu wire welding wocingo lwenziwa ezikumgangatho ophezulu ephantsi carbon intsimbi intsimbi, nto leyo yenziwa yi oluzenzekelayo, ngqo kwaye ichanekile ngoomatshini izixhobo indawo iwelding, uze emva koko yamkele unyango komhlaba inkqubo idipri galvanizing. Iveliswa ngumgangatho oqhelekileyo waseBritane. Umphezulu womnatha ugudile kwaye ucocekile, ubume buqinile kwaye bufana, kwaye intsebenzo iyonke intle. Isefu yocingo oluhanjiswe ngesinyithi yahlulwe yaziindidi ezimbini: i-electro-galvanized kunye ne-hot-dip galvanized. Umbane ...
I-Wire Meh yePhaneli
Iindidi zentsimbi edityanisiweyo zezi: umnatha ongenasici Le umnatha welding yenziwe ezikumgangatho ophezulu ucingo sentsimbi kunye welding yi ngqo oluzenzekelayo welding ngoomatshini. Emva kokuba i-mesh eyenziwe nge-welding yenziwe, idibeneyo (i-electroplating okanye i-hot-dip); Isefu welding umnatha welding yi welding yi ezikumgangatho ophezulu ucingo kwalenza intsimbi ngokusebenzisa ngqo oluzenzekelayo ngomatshini welding. imveliso. Ezi mveliso zikhankanywe apha ngasentla zinokuguda ...
Intambo evaliweyo ijijekile ngumatshini wentambo ye-barbed oluzenzekelayo. Ucingo oluphambili lwentambo ye-PVC lunokubanjiswa ngocingo okanye ucingo olumnyama. Uhlobo lweMveliso: uboya bokusika kunye nokunxibelelana kabini Impahla ekrwada: umgangatho ophezulu wocingo lwekhabhoni yentsimbi. Inkqubo yokunyanga umphezulu: ukujija ngombane, ukutshisa okushushu, ukutyabeka ngeplastiki, ukutshiza ngeplastiki. Isicelo: Isetyenziselwa ukukhusela ...
Ngocingo Oluhlabayo Oluhlabayo
Ucingo olunameva luhlobo lwezinto zokubiyela ezenziweyo ngezixhobo zentsimbi ezibukhali kunye nocingo oluqinileyo. Ucingo oluhlabayo lunokufakwa ukufezekisa iziphumo zokoyikisa kunye nokumisa ukungena kwabangeneleli, ngokugqobhoza kunye nokusika iincakuba ezibekwe phezulu eludongeni, kunye noyilo olukhethekileyo olwenza ukunyuka nokuchukumisa kube nzima kakhulu. Ucingo kunye nomtya zihanjisiwe ukukhusela umhlwa. 1.Izinto eziphathekayo: Iphepha elishushu elitshisiweyo leDippe eshushu ...
Ingasetyenziselwa ukuthintela ingxolo kuthintelo lwezithintelo koohola bendlela, oololiwe, oohola bendlela kunye nolunye uthutho kunye nezixhobo zikamasipala ezidlula kwiindawo ezisezidolophini, kunye neepaneli zokufunxa izandi zokuvalela isandi kunye nokunciphisa ingxolo kweendonga zokwakha, amagumbi okuvelisa, izakhiwo zefektri, kunye eminye imithombo yengxolo; inokusetyenziswa kwizakhiwo Ingasetyenziselwa iisilingi, iiphaneli zodonga, iminatha yesandi, isandisi-zandi semathiriyeli yesandi; iipleyiti ze-orifice ezihonjiswe kakuhle ezinokusetyenziselwa ...
Eyandisiweyo Metal enemingxuma
I-carbon yentsimbi eyandisiweyo yeyona mesh yanda kakhulu kwezoqoqosho phakathi kwezinto zesinyithi. Iimathiriyeli: Isefu yentsimbi ekhabhoni. Ezahlukeneyo: Uhlobo oluncinci, oluphakathi kunye olunzima olwandisiweyo lwesinyithi. Ukuvula ngokumila kwedayimane, i-hexagonal okanye imilo ekhethekileyo. Sebenzisa: Isetyenziswe ngekhonkrithi kwizakhiwo nasekwakheni, ukugcinwa kwezixhobo, ukwenza ubugcisa kunye nemisebenzi yezandla, egubungela isikrini seklasikhi yesandi sokuqala. Ukubiya kwakhona uhola wendlela omkhulu, istudiyo, uhola wendlela. Ubunzima bekhabhoni yensimbi enokusetyenziswa inokusetyenziswa ...
Izinto eziphathekayo: 1) Intambo yentsimbi engenasiphelo (201,202,302,304,304L, 310,316,316L) 2) Intambo yentsimbi yekhabhoni ephezulu, intsimbi yekhabhoni ephantsi, intsimbi yekhabhoni ephakathi, ucingo lwentsimbi ye-Mn. 3) ucingo intsimbi kwalenza, ucingo intsimbi kwalenza, ucingo non-ayoni. Ezinye izinto ziyafumaneka xa ziceliwe. 2.Application: Crimped ucingo enemingxuma isetyenziswa njenge ucingo okanye amacebo okucoca ezininzi mveliso; Heavy Duty Crimped wocingo nazo kuthiwa Quarry enemingxuma, oko ubukhulu becala isetyenziswa screen kwemigodi, amalahle mveliso, ulwakhiwo kunye namanye amashishini. 3.Nika inkxaso ...
Ezona ndlela ziphambili zokusebenzisa ucingo lweTecnofil zinikwe apha ngezantsi